'नेपालको राजनीतिक उपलब्धिलाई हामीले खुशीसाथ हेरिरहेका छौं'
युसुफ बिन मोहम्मद अहमद अल हेल नेपालका लागि कतारका राजदूत हुन् । नेपालका हजारौं कामदार कार्यरत मुलुक कतारले डिसेम्बर १८ मा राष्ट्रिय दिवस मनाउँदैछ ।
कतारमा नेपाली कामदारको अवस्था, भविष्यमा हुनसक्ने थप रोजगारी सिर्जनालगायत नेपाल–कतार सम्बन्धमा विभिन्न आयामबारे कतारका सफल कूटनीतिज्ञ मानिने राजदूत युसुफ बिन मोहम्मद अहमद अल हेलसँग लोकान्तरले कुराकानी गरेको छ ।
नेपालसँगको ४ दशक लामो कूटनीतिक सम्बन्धलाई कतारले कसरी परिभाषित गरेको छ ?
नेपाल र कतारबीचको दुईपक्षीय सम्बन्धका बारेमा म के भन्न चाहन्छु भने विगत ४ दशकदेखि सम्बन्ध उचाइमा पुगिरहेको छ । कतार सरकारले नेपालसँग विभिन्न सहयोगको क्षेत्रमा सम्झौताहरू गरेको छ, जसले दुई सरकारबीच रहेको सहकार्य औपचारिक रूपमा बलियो बनाएको छ । हामीले हाम्रो सम्बन्धलाई थप अगाडि बढाउन सकारात्मक कदमहरू लिएका छौं ।
हामीले पहिलो श्रम सम्झौता सन् २००५ मा गर्‍यौं जुन नेपलले कुनै दोस्रो देशसँगको पहिलो श्रम सम्झौता थियो । हामीले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि सहकार्यको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छौं, जसले लगानी सुरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा पनि हामी दुवै देशको सहकार्य बढेको छ र संयुक्त राष्ट्रसंघले उठाउने विभिन्न मुद्दामा पनि हामी समान दृष्टिकोणबाट अगाडि बढेका छौं ।
भविष्यमा नेपाल र कतारले कसरी सहकार्य गर्न सक्छन् ? एक असल र समृद्ध मित्रराष्ट्रको हैसियतले ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को अभियानलाई कतारले कसरी सघाउन सक्छ ?
सन् २००६ पछाडिको नेपालको राजनीतिक उपलब्धिलाई हामीले खुशीसाथ हेरिरहेका छौं । सन् २०१५ मा बनेको संविधान र २०१७ को आम निर्वाचनको सफलता र त्यसपछिको राजनीतिक स्थिरतालाई हामी मित्रराष्ट्रले गरेको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा लिन्छौं । नेपालसँग हामी कृषि, ऊर्जा र अन्य लगानीका क्षेत्रमा सहकार्य गर्न चाहन्छौं ।
पश्चिमा सञ्चारमाध्यमहरूले रंगशाला निर्माणमा संलग्न कामदारहरूको सन्दर्भमा गलत समाचारहरू प्रवाहित गरिरहेका छन्, तर उनीहरू पछिल्लो वास्तविकताबारे अनविज्ञ देखिन्छन् ।
सरकार र लगानी बोर्डले लिएका सुधारका प्रयासहरूको हामीले सर्‍हाना गछौं । हामीले अझै बढी महत्त्वपूर्ण आर्थिक विकासका सम्झौता गर्न खोजिरहेका छौं । मैले नेपाली व्यापारी समुदायलाई कतारमै बोलाएर व्यापार विस्तारको विषयमा निरन्तर छलफल गरिरहेको छु । कतारमा हुने व्यापार प्रवद्र्धन कार्यक्रमहरूमा नेपाली व्यापारीलाई बोलाएर द्विपक्षीय समझदारी गरेको छु र कतारका कम्पनीलाई पनि नेपालमा नयाँ सम्भावनाको खोजी गर्न आग्रह गरेको छु ।
नेपालले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षको रूपमा मनाउँदैछ, यो भ्रमण वर्ष सफल बनाउन र कतारका पर्यटकलाई नेपालको भ्रमण गराउन दूतावासले केही भूमिका खेल्छ ?
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० अभियान कतारका साथसाथै संसारभरी घोषणा हुँदैछ, हामीले त्यसलाई स्वागत गर्छौं र नेपालको प्रयासलाई प्रवद्र्धन गर्न मद्दत गर्छौं । हामी के विश्वास गर्छौं भने नेपालले पर्यटनको क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना बोकेको छ, जुन अन्य देशमा कम देखिन्छ ।
विगत केही वर्षयता कतारबाट नेपाल आउने पर्यटकको दर बढिरहेको छ । विशषेगरी हिमाल आरोहण गर्न आउनेको दर अझ बढी छ । नेपालमा प्राकृतिक चिकित्सा र चिकित्सकीय पर्यटनको पनि सम्भावना देखिन्छ, जसमा खाडी मुलुकहरू अनविज्ञ छैनन् ।
कतार नेपाली कामदारको रोजाइको एउटा मुख्य गन्तव्य हो, त्यहाँ काम गर्ने नेपाली कामदारको अवस्था कस्तो छ ?
विगत केही वर्षयता कतारले श्रम सुधारको क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारेको छ । हामीले श्रम ऐन संशोधन गरेका छौं । प्रायोजन सिस्टम बन्द गरेका छौं । कामदारको स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चिता गरेका छौं र कामदारले रोजगादता कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउने नियम ल्याएका छौं । हामीले कामदारलाई बैंकमार्फत नै तलब दिने, रोजगारदाता कम्पनीले जबरजस्ती पासपोर्ट राख्न नपाउने प्रावधान ल्याएका छौं । कामदार र रोजगारदाताको बीचमा हुने विवादको हल गर्न श्रम अदालतको स्थापना गरेका छौं । कामदारलाई मेडिकल र मनोरञ्जनका सुविधाहरू दिएका छौं । विशेष गरेर नेपाली कामदारको हकमा उनीहरूले कतारको विकासमा खेलेको भूमिकालाई विशेष मान्यता दिएका छौं ।
श्रमका क्षेत्रमा केही समस्या अझै पनि छन्, विशष गरेर गैरकानूनी म्यानपावर, स्वतन्त्र भिषाको समस्या र तस्कर एजेन्टहरूले श्रम क्षेत्रमा समस्या पैदा गरिरहेका छन् । हामीले यस्ता समस्या हल गर्न प्रयास गरिरहेका छौं । नागरिक संगठनले चालेका कदमहरूको सर्‍हाना गरेका छौं र के विश्वास गर्छाैं भने आप्रवासी कामदारहरू दुवै देशका लागि उत्तिकै फाइदाजनक छन्, त्यसैले उनीहरूको अधिकार दुवै देशले संरक्षण गर्नुपर्छ ।
सन् २००५ मा गरेको श्रम सम्झौतालाई हामीले पुनः नवीकरण गर्न खोजेका छौं, त्यसका लागि संयुक्त समितिले काम गरिरहेको छ । कतारले नेपालमा कतार भिषा सेन्टर खोलेको छ, जसले आप्रवासी नेपाली कामदारको हितमा काम गरिरहेको छ । यस किसिमको सहकार्यका लागि नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौ ।
कतार सरकारले भिजन २०३० नीति लिएको छ, जसमार्फत कतारमा थप रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपाली कामदारप्रति कतार सरकारको धारणा कस्तो छ ? भविष्यमा कतारमा नेपाली कामदारका लागि रोजगारी थप गर्ने कुनै योजना छ कि ?
नेपाली कामदारको इमान्दारी र कामप्रतिको समर्पणलाई कतार सरकारले सर्‍हाना गरेको छ । स्वयं नेपाली कामदारहरू पनि आफ्नो काममा रमाएका छन् र उनीहरूले श्रमको सम्मान गरेका छन् ।
कतार सरकारले भिजन २०३० नीति लिएको छ, जसमार्फत कतारमा थप रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ । सन् २०२२ को विश्वकप पछाडि हामीले अरू ठूला विकासका आयोजनाको परिकल्पना गरेका छौं जसबाट योभन्दा अझ बढी रोजगारी सिर्जना हुने देखिन्छ ।
यो छोटो अवधिमै कतारले कसरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्यो ? नाकाबन्दीलाई सामना गर्दै कतार कसरी आत्मनिर्भर भयो ?
कतारको मुख्य नेतृत्वसँग एकदमै स्पष्ट भिजन छ, जसले कतारको विकास र कतारी जनताको समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेको छ ।
बलियो अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीमार्फत हामीले आफ्नो देशको स्रोत र साधनको पहिचान तथा उपयोग गरेका छौं ।
हाम्रो राष्ट्रप्रमुख शेख तमिम बिन हमाद बिन खलिफा अल थानीले लिनुभएको एकताको मार्गदर्शन र कतारलाई संसारकै उच्च तहमा पुर्‍याउने अठोटले गर्दा नै कतार यहाँसम्म आइपुगेको हो र यो अझै अगाडि बढ्छ । उहाँले लिनुभएको राष्ट्रिय एकताको नीतिले नाकाबन्दीको समयमा पनि हामी निरन्तर अगाडि बढिरह्यौं । राष्ट्रिय एकताको अवधारणाले कतार थप आत्मनिर्भर भएको छ ।
सन् २०२२ मा कतारले विश्वकप आयोजना गर्दैछ, कस्तो तयारी छ ? पश्चिमा मिडियामा नेपाली कामदारबारे आइरहेको समाचारको वास्तविकता के हो ?
धेरैजसो तयारी पूरा भइसकेका छन् र केही रंगशालाहरू त सञ्चालनमा पनि आइसकेका छन् । हामीले गल्फ कोअपरेसन काउन्सिल (जीसीसी) फूटबल कम्पिटिसन आयोजना गरका थियौं जुन सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको छ । रंगशाला निर्माणका क्रममा नेपाली कामदारले दिएको योगदानका लागि धन्यवाद भन्न चाहन्छु ।
कहिले काहीँ पश्चिमा सञ्चारमाध्यमहरूले रंगशाला निर्माणमा संलग्न कामदारहरूको सन्दर्भमा गलत समाचारहरू प्रवाहित गरिरहेका छन्, तर उनीहरू पछिल्लो वास्तविकताबारे अनविज्ञ देखिन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरूले कतारको नियमित अनुगमन र अध्ययन गरिरहेका छन् ।
२०२२ को विश्वकप आयोजना गर्ने सबन्धमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थासँग उपयुक्त पहल र परियोजना अगाडि बढाएका छौं, कतार एक्लैले यो सबै गर्न सक्दैन ।
नेपालको राजनीतिक उपलब्धिलाई हामीले खुशीसाथ हेरिरहेका छौं । सन् २०१५ मा बनेको संविधान र २०१७ को आम निर्वाचनको सफलता र त्यसपछिको राजनीतिक स्थिरतालाई हामी मित्रराष्ट्रले गरेको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा लिन्छौं ।
कतारका तर्फबाट नेपालमा उच्चस्तरीय भ्रमणको सम्भावना छ ?
नेपाल र कतारबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध थप मजबुत पार्न दूतावासले उच्चस्तरीय द्विपक्षीय भ्रमण महत्त्वपूर्ण साबित हुने देखेको छ । नेपालकी राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले गरेको कतार भ्रमणलाई हामीले सम्मान व्यक्त गरेका छौं । उक्त भ्रमण अत्यन्त सफल र फलदायी भएको थियो । भविष्यमा थप भ्रमण हुनेमा आशावादी छौं ।
कतारका तर्फबाट त्यो प्रकारको उच्चस्तरीय भ्रमणका लागि हामीले पहल गरिरहेका छौं, जसले द्विपक्षीय सहकार्यलाई झन मजबुत बनाउने छ । हामीसँग विदेश मन्त्रालयस्तरीय संयुक्त कार्यदल पनि छ । उक्त कार्यदलले राजनीतिक मामिलाको बारेमा छलफल गर्ने गर्छ । म तपाईंलाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने छिट्टै कतारका तर्फबाट उच्चस्तरीय भ्रमण हुन्छ ।
अन्त्यमा, यही डिसेम्बर १८ तारिखमा परेको करातको राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा केही भन्न चाहनुहुन्छ कि ?
कतारको राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा म राष्ट्रप्रमुख शेख तमिम बिन हमाद बिन खलिफा अल थानीलाई बधाई दिन चाहन्छु । साथसाथै कतारका जनतालाई पनि बधाई भन्न चाहन्छु । सोही अवसरमा नेपाल सरकार र नेपाली जनताको विकासको उत्कट चाहनालाई पनि गहिरो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
विगत केही वर्षदेखि नेपालको रूपान्तरण भइरहेको देख्न सकिन्छ, जसमा कतारले पनि साथ दिइरहेको छ । हामी एकआपसमा कुरा र सहकार्य गर्न तयार छौं । हामी नेपालको समृद्धि, सुरक्षा र स्थिरता देख्न चाहन्छौं ।
'मिडिया ब्रिफिङ'का नाममा लुट : दैनिक १५ मिनेट फ्रीमा फेसबूक लाइभ गराएबापत ५८ लाख स्वाहा !
काठमाडौंमा कोरोना संक्रमण बढेपछि अस्पतालमा परीक्षण गराउनेको लर्को
भारतीय मिडियामा नेपालबारे अफवाह, के हेरेर बस्छ हाम्रो दूतावास ?